विध्वंस हथौडा कसरी प्रयोग गर्ने?
२१-०7-१-15 मा प्रशासक द्वारा
डिमोलिशन हथौड़ा निर्माण उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र सबै भन्दा कडा उपकरणहरू छन् तर ह्यान्डल गर्न सजिलो छ। यो शक्तिशाली उपकरण कंक्रीटको ठूला संरचनाहरू ल्याउन उपयोगी छ। डिमोलिशन हथौड़ाले बिट प्रयोग गर्दछ जुन क concrete्क्रीट सतहमा भारी पाउन्ड हुन्छ जबसम्म यो टुक्रिदैन। गलत ...
तपाईंलाई किन ग्यास चेन आरा चाहिन्छ?
जब यो भारी शुल्क रूख काट्ने कुरा आउँछ, ग्यास संचालित चेनसा भन्दा राम्रो कामले केही पनि गर्दैन। यी गर्जने जनावरहरू निर्माण कम्पनीहरू, आर्बोरिस्टहरू, लाम्बरजेकहरू, र घरमालिकहरूसँग लोकप्रिय छन् जसले केही गम्भीर व्यवसायको हेरचाह गर्नु आवश्यक छ। यस लेखमा, हाम्रो उपकरण नर्ड्स टीम ...
घर पालना र DIY प्रोजेक्टहरूको लागि तपाईंलाई आवश्यक उर्जा उपकरणहरू
जब म निर्माण कार्यमा दोहोरिएको काम गर्दैछु, म मेरो समय व्यतीत गर्न मानसिक खेलहरू खेल्न चाहन्छु। यहाँ मेरो सूची छ र मैले तिनीहरूलाई किन छान्ें। जब हामी बिदाको तर्फ लाग्छौं, यसले तपाईंलाई कसैको उपकरण संकलनमा मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ, वा मौसमी बिक्रीको सहयोगमा तपाईंको आफ्नैमा थप्न। होइन ...
Re कारण किन तपाईलाई आरा चाहिन्छ
एक ड्रिल पछि, जिगस सामान्यतया दोस्रो पावर उपकरण हो कि एक DIYer ले प्राप्त गर्छ। यी उपकरणहरू अत्यन्त बहुमुखी छन् र सबै उमेरका निर्माताहरूले ह्यान्डल गर्न सक्दछन्। आराक्षाहरूले काठ र धातुमा घटताहरू काटने मा उत्कृष्ट छन् - तर उनीहरूको भण्डारमा अधिक धेरै छ। यदि तपाईंसँग जिग्स छैन भने ...
कसरी गर्ने: पात ब्लोअर प्रयोग गर्नुहोस्
प्रलोभन भनेको यसलाई चीप गर्न मात्र हो, तर प्रविधी र रणनीति यस शक्ति उपकरण चलाउनमा संलग्न छन्। कसरी पात ब्लोरको ठीकसँग प्रयोग गर्ने भनेर फेला पार्नुहोस् र तपाईं ब्याकट्र्याकिंगमा खर्च गर्ने समयको मात्रा कम गर्नुहोस्। गिरावट फुटबल, तातो स्याउ साइडर, र कद्दू पाईले भरिएको छ। र पातहरू। कसैको लागि...
ए Gr्गल ग्रिन्डर कसरी प्रयोग गर्ने
कोण grinders बहुउपयोगी उपकरण हो कि धातु पीस र टाइल काट्न, stucco र pvers, मोर्टार रूट, र तिनीहरू बालुवा गर्न सक्छन्, पोलिश र तीखो गर्न सक्छन्। कोण grinders को सिंहावलोकन तपाईं एन्ग्लर ग्राइन्डरहरू पाउनुहुनेछ जुनसुकैँ पावर उपकरण बेचिन्छ। ठूला हात ग्रिन्डरहरू उपलब्ध छन्, तर लोकप्रिय--i ...
रेसप्रोकेटिंग सो उपयोग र युक्तिहरू
Reciprocating आरी विध्वंस सजिलो र अधिक रमाईलो बनाउँछ। तपाईं यसलाई स crow्घर्ष गर्न सक्नुहुनेछ र विभिन्न किसिमका कागबरहरू र ह्याक्सवाहरू काटेर फाँट्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं एक पारस्परिक आरा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई मात्र काट्न सक्नुहुन्छ। यो परम विध्वंस उपकरण हो। विन्डोज, भित्तेहरू, प्लम्बरिंग, ढोकाहरू र अधिक - केवल काटेर टस। यहाँ '...
आज एक स्वयंसेवक हुन!
कang्ग्टनको बॉस श्री सु नागरिकलाई COVID-19 खोपको शट लिनको लागि स्वयंसेवकको रूपमा छन्।
इलेक्ट्रिक उपकरणहरू कसरी छनौट गर्ने
विद्युतीय उपकरणहरू खरीदको लागि सावधानी: सबै भन्दा पहिले, विद्युतीय उपकरणहरू हातले समात्ने वा चल वा यांत्रिक उपकरणहरू हुन् जुन मोटर वा इलेक्ट्रोमग्नेटद्वारा संचालित हुन्छन् र प्रसारण संयन्त्रको माध्यमबाट कार्य टाउकोमा काम गर्दछन्। इलेक्ट्रिक उपकरणहरू संग बोक्न सजिलो को सुविधा को छ, साधारण अपरेशन ...
इलेक्ट्रिक उपकरणको प्रकार
इलेक्ट्रिक ड्रिल मुख्य विनिर्देशनहरू,,,,,, १०, १,, १ 19, १,, २ 23, २,,,,,, mm, mm mm मीमी इत्यादि हुन्। संख्या पनी स्टिलमा ड्रिल बिटको अधिकतम व्यासलाई दर्साउँछ 390n / मिमी को। गैरफेरस धातुहरू, प्लास्टिक र अन्य सामग्रीहरूका लागि, मा ...
कसरी तपाईंको गाडीबाट पा from्ग्रे हटाउने
तपाईको टायर तपाईको गाडीको एक अनिवार्य अंग हो। तिनीहरू त्यहाँ सुरक्षा, सान्त्वना, र प्रदर्शन को लागी छन्। टायरहरू पा the्ग्राहरूमा राखिन्छन्, जुन बारीमा गाडीमा राखिन्छ। केही सवारी साधनहरु मा दिशात्मक वा स्थितिगत टायर हुन्छ। दिशात्मकको अर्थ भनेको तिवारी ...